BCC - အင်ဂျင်နီယာအော်ပရေးရှင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
HPA ဆုပေးပွဲများသည် Creative Categories တွင်ပါ ၀ င်ရန်အတွက်ခေါ်ဆိုမှုကိုကြေငြာသည်
Dejero နှင့် First Mile တို့သည် COVID-19 နှင့် ကျော်လွန်၍ ရုပ်ရှင်၊ တီဗွီနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုအတွက်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုလွယ်ကူစေသည်
အသံနှင့်အလင်းရောင်အထူးကျွမ်းကျင်သူ Group One သည် US Calrec ဖြန့်ဖြူးသောကွန်ယက်ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ဖန်တီးသည်
Lokshahi News သည်အနာဂတ်တွင်အဆင်သင့်ဖြစ်သောကစားပွဲနှင့် Grass Valley နှင့် News Production Solutions တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
နယူးယောက်အခြေစိုက် Post Alliance က“ Post Break” ဗီဒီယိုညီလာခံကိုတိုးချဲ့လိုက်သည်။
NUGEN အသံသည် Halo Downmix Update ကိုကြေငြာခဲ့သည်
LaFace & McGovern Associates မှ Brightline ကိုကိုယ်စားပြုသည်
BoFiNet သည်ဘော့ဆွာနာတွင် Globecast for Now TV OTT ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖန်တီးသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » BCC - အင်ဂျင်နီယာ Operarions ကြီးကြပ်ရေးမှူး
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: BCC - အင်ဂျင်နီယာ Operarions ကြီးကြပ်ရေးမှူး
ရာထူး: BCC - အင်ဂျင်နီယာ Operarions ကြီးကြပ်ရေးမှူး
Location: အတ္တလန်တာ GA US
လုပ်ငန်းတာဝန်များ: ဒီအနေအထားအင်ဂျင်နီယာစစ်ဆင်ရေး၏ဒါရိုက်တာမှသတင်းပေးပို့နှင့်သုံး 24 /7ဆိုင်းအလှည့်မဆိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ရက်ပြောင်းကုန်ပြီတာဝန်များမှနေ့ကိုကြီးကြပ်ဖို့ထို့အပြင်လူတစ်ဦးချင်းစီသက်ဆိုင်ရာပြောင်းကုန်ပြီအပေါ်တစ်ဦးအဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လိမ့်မည်ကို၎င်း, ပြောင်းကုန်ပြီအပေါ်အင်ဂျင်နီယာများမှအလုပ် assign ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကဗီဒီယို / အသံပိုင်ဆိုင်မှုများဆက်လက် data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသေချာစေရန်အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာဆိုင်ရာစနစ်များ, သိုလှောင်ရေးကိရိယာနှင့်အလိုအလျောက်စီမံခန့်ခွဲရန်စသည်တို့ကို, On- လေတပ်လိုင်းများထုတ်လွှင့်, ထိုကဲ့သို့သောအလိုအလျောက်စနစ်များ, ဆာဗာများ, Router ကအဖြစ်ပစ္စည်းကိရိယာများမအောင်မြင်မှုများဖော်ထုတ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်တတ်ကျွမ်းကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Shift ကြီးကြပ်ရေးမှူး communicate နှင့်ကြီးကြပ်အလုပ်တာဝန်တွေနှင့်စီမံကိန်းအစီရင်ခံစာများနှင့်အတူလက်မပါဘဲပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်အတွက်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုပေး။ အဆိုပါ Shift ကြီးကြပ်ရေးမှူးကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး, ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စားသုံးမိပါနဲ့ Maintenance တာဝန်ဝတ္တရား၏နေ့စစ်ဆင်ရေးမှနေ့လမ်းညွှန်မှုပေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်လျော်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များလုပ်လျက်ရှိသည်နှင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝနျမြား / လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအညီနောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်အာမခံထားဖို့ဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုနှင့်လမ်းညွှန်မှုပေး။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ skillset ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်မလိုအပ်အဖြစ်စစ်ဆင်ရေးအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်။ အဆက်မပြတ်ဖြစ်စဉ်ကိုတိုးတက်မှုများအတွက်ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအသွားအလာအကဲဖြတ်ရန်။ နည်းပြ / ဆရာန်ထမ်းများနှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်အဘို့ထိုသူတို့အသိအမှတ်မပြု။ ထိထိရောက်ရောက်ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအမိန့်ညွှန်ကြားချက် communicate ။ အထက်အဆင့်အထိစီမံခန့်ခွဲမှုမှ Mid-တနှစ်နှင့်တစ်နှစ်လျှင်အဆုံးအကဲဖြတ်ဘို့တုံ့ပြန်ချက်သည်။ ရှင်းနေသည်မှာ communicate နှင့်ဌာနဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များပြဋ္ဌာန်းရန်။ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်တောင်းဆိုမှုကိုကျေနပ်ဖို့ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အင်ဂျင်နီယာစီမံခန့်ခွဲမှု, ဝန်ထမ်းများနှင့်ဖောက်သည်များအကြားဆက်ဆံရေးရုံးအဖြစ်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။ ဖောက်သည်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာအကြားသမဝါယမဆက်ဆံရေးပွုစုပြိုးထော။
အရည်အချင်းများ: တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖှဲ့အစညျးအတှငျးအင်ဂျင်နီယာထောက်ခံမှုသို့မဟုတ်ညီမျှစီမံခန့်ခွဲမှု / ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍများတွင်အတွေ့အကြုံ3+ နှစ်ပေါင်း။
လက်ပေါ်အတွေ့အကြုံကိုထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာစနစ်များအတွက်အတူ2နှစ်ပေါင်းအနည်းဆုံး။
စသည်တို့ကိုထုတ်လွှင့်ဆက်စပ်သောကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမစမ်းသပ်ကိရိယာများ, waveform မော်နီတာ, အားနည်းချက်ကိုမျက်နှာစာများ, Multi-မီတာ oscilloscopes, စမ်းသပ်မှု signal ကိုမီးစက်, ရောင်စဉ်ဖြာ၏အသုံးပြုမှုအတွက်ကျွမ်းကျင် Be
, ဦးစားပေး multitask, ကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက်အပေါ်ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဖြစ်စေလျက်, နှင့်မြင့်မားသောစိတ်ဖိစီးမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်တခြားသူတွေရဲ့အလုပ်ညွှန်ကြားနိုင်စွမ်း။
Turner အသံလွှင့်စနစ်, Inc နှင့်၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများတူညီသောအခွင့်အရေး Equal Opportunity အလုပ်ရှင်များနှင့် E-Verify အသုံးပြုသူများကိုဖြစ်ကြသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီလျှောက်ထားပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲအလုပ်အကိုင်အများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား, အရောင်, ဘာသာရေး, လိင်, မူရင်းနိုင်ငံသား, လိင်, ကျား, မဝိသေသလက္ခဏာ, မသန်စွမ်း, ဒါမှမဟုတ် protected ဝါရင့် status ကိုခံရလိမ့်မည်။
ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း
ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုတရားဝင် NAB Show ကိုမီဒီယာမိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ် Beat ကျနော်တို့ Animation ရဲ့, အသံလွှင့်, Motion Picture နဲ့ Post ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ, ရေဒီယို & တီဗီနည်းပညာကိုဖုံးလွှမ်း။ ကျနော်တို့ BroadcastAsia, CCW, IBC, SIGGRAPH, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့်ပိုပြီးတူသောစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များနှင့်စည်းဝေးကြီးများကိုဖုံးလွှမ်း!
အသံလွှင့်ခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးရပို့စ်များကိုမဂ္ဂဇင်း Beat (အားလုံးကြည့်ရှု)
အလင်း / w ကင်မရာအော်ပရေတာ - ဇူလိုင်လ 8, 2020
Trailer / မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အယ်ဒီတာ - ဇူလိုင်လ 8, 2020
ဗီဒီယို streaming ကျွမ်းကျင်သူ - ဇူလိုင်လ 8, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-07-31
အလင်း / w ကင်မရာအော်ပရေတာ
Trailer / မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အယ်ဒီတာ
ဗီဒီယို streaming ကျွမ်းကျင်သူ
မီဒီယာ Manager ကို
Doc Editor ကိုအင်္ဂါရပ်
Post ထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး / အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်